Isaladi yaseRopotamo Iimpawu zobugcisa - izimvo zekhaya kunye negadi
18.09.2014 Ithunyelwe ngu: Izixhobo zobugcisa
Ubusika, Imibono yasekhaya, Iresiphi
Iresiphi yalo lonke ubusika obuthandwayo-iRopotamo isaladi.
Iimveliso eziyimfuneko zedosi enye (malunga ne-8 yemigangatho emikhulu):
Iibhontshisi ze-1 kg
I-1 enkulu jar yeecocon ezinesitokhisi
I-1 isitya esikhulu seetapile ezigayiweyo
I-1 enkulu jar ye-canne utamatisi ekhethekileyo
I-1 kg yeekherothi
I-1 imbiza enkulu yamandongomane athanjisiweyo (ngokuzithandela)
Amakhonkco e-parsley ye-1-2 Imarina
Iviniga - 180 c
Isol - 40 c
Qaphela: Kule meko, le yimifuno eyenziwe ekhaya kunye neetapile ezicuthiweyo ezilungiselelwe ngokokuthanda kwakho. Ukuba uthatha isigqibo sokusebenzisa iinkonkxa ezithengiweyo, asiqinisekisi incasa kunye nomgangatho wokuphela kwesiphumo.
Sipheka iimbotyi kunye nezaqathi ngokwahlukeneyo. Sika i-karoti kwi-cubes, i-pepper egadiweyo kunye neesapile, i-parsley ekhethiweyo.
Fudumeza ioyile, iviniga, ityuwa kunye neswekile kwiswekile kwaye ugcine kwisitovu de ityiwa neswekile inyibilike. Susa kwisitovu ukuze upholile.
Silungisa isitya sobukhulu obufanelekileyo kwaye udibanise iikherothi eziphekiweyo, iikhukhamba ezisikiweyo kunye nepelepele, iparsley kwaye ugalele iimbotyi eziphekiweyo kuzo. Ekugqibeleni songeza isitya setamatato yokuncamathisela. Hlanganisa kwaye uthele kwi-marinade epholileyo. Kwakhona, sishukumisa ngobumnene. Vumela ukuba zime ubusuku bonke kubanda ukudibanisa iincasa zezithako kakuhle. Ngosuku olulandelayo, kusasa, sigcwalisa izimbiza kunye ne-sterilize. Yiyo le!
ebusika ekhaya, ukumbombozela ekhaya, Ukutya okusemathinini, ubusika, Ukutya okusemathinini, iresiphi yasebusika, iresiphi kunye neembotyi, zokupheka, zokupheka ebusika, siyakrokra, i lettuce, Isaladi yaseRopotamo, izimvo zekhaya, uyilo lwangaphakathi, ifanitshala, izimvo zangaphakathi, Yila izimvo, ikhaya lanamhlanje, ukuhombisa izimvo, izimvo zobugcisa
Khonza iitapile ezintle ezigadiweyo ngendlela ye-rose. Sika okanye ubeke iitapile ...
Umbono omnandi wokwenza iilekese ezenziwe ekhaya ngendlela yee-hedgehogs. Ingenziwa ...
Iipayi ezimangalisayo ze-asian patty
I-Uzbeks kunye neTajiks zinezinto zokufunda ezifanayo kwaye zombini amazwe ahambelana nokubaluleka ...
Ingqolowa i-tortilla enenyama kunye noshizi
Izinto ezibhakiweyo zingenziwa kwiintlobo ezahlukeneyo zomgubo, nayiphi na ...
Siza kukubonisa iresiphi yekapama ngendlela esithanda kakhulu ...
Idessert yobisi eyenziwe ekhaya
Sibonisa umbono wolungiselelo lwedessi yasekhaya yobisi, incasa yayo ayi ...
I-Hefekranz yaseJamani okanye i-Hefezopf
I-Hefekranz okanye i-Hefezopf (Ileta. UMeyi Wreath okanye uMayan Tile) sisilingo esilingayo sokusasazeka ...
Umbono onwabisayo kunye nokulungiselela okulula ukulungiselela i-anyanisi kunye neresiphi yenyama ye-bacon. Oku kulunga kwasekuqaleni ...